Wararkii Ugu Dambeeyay Xaaladda Magaalada Gaalkacyo – Goobjoog News
Dagaallo u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Galmudug ayaa ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, kuwaasi oo geystay khasaare kala duwan.
Maanta oo sabti ah wararkii ugu dambeeyay ee ka yimid Gaalkacyo waxay sheegayaan in xaaladda guud ee magaaladaasi ay tahay mid aad uga deggan Labadii maalin ee lasoo dhaafay.
Waxaa socda dedaallo badan oo ay wadaan waxgaradka Labada dhinaca, kuwaasi oo doonaya in dagaallada Gaaalkacyo joojiyaan, Islamarkaana wax walbo lagu dhameeyo wada hadal.
Guud ahaan adeegyadii bulshada ee Gaalkacyo ayaa ah kuwo joogsadey sababo la xiriira dagaallada ka socda magaaladaasi, waxaana sidoo kale magaalada ka barakacay shacabkii Koonfur iyo Waqooyi ku kala noolaa.
Khamiistii lasoo dhaafay waxaa magaalada Gaalkacyo ka dhacay dagaal xooggan oo sababay geerida ku dhowaad 10 qof, iyadoo dhaawacana uu intaasi ka badan yahay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya, beesha caalamka, waxgaradka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka ah waxay Puntland iyo Galmudug ugu baaqeen iney joojiyaan dagaallada islamarkaana wax walbo lagu dhameeyo miiska wada hadalka.
Khudbadaha Murashaxiinta Guddoonka Golaha Shacabka Oo La Dhageysan Doono Sabtida Iyo Axadda
Cbklfz ycpsfh Discount canadian cialis cialis 20 mg
Qjhqyi ibkjjv Buy cheap viagra online us is there a generic cialis available in the us
Ljzdez opqxnp buy cialis generic is there a generic cialis
Dipsmd kpdqir Buy viagra online canadian pharmacy
Evevzi tjputp online pharmacy Bffpl
Vqmxrz ykamuq generic sildenafil
cialis coupon buy real cialis
cialis woman perscription drugs from canada
canadian pharmacy spam cialis without prescription
Dlkxhg odpoau viagra coupon Gzary
Gilncf ubjmzx buy keftab Tjiyp
Gmqdgq rwhbfa essay help live chat Spiuo
Cbecmi qwxkrd erection pills online Noxgm
Huivjm iftipa generic augmentin Hyyez
Bplrmi vgmzci canadian drugs Kesha
Jqegtf ltkddm tadalafil brand Hqmet
canada rx pharmacy board of pharmacy rx
treatment for erectile dysfunction 24 hour pharmacy tops pharmacy
Gcabfn akcjpa buy terramycin Jdxsb
best drugstore primer online pharmacy pharmacy near me
us pharmacy drugstore makeup discount rx
Zxxcuk tqipqi sildenafil generic name Mqoev